"Venous Leak" - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - ကောင်းမွန်သောအချက်အလက်များ
သင်၏လိင်တံသည်သွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်သွေးကိုသိုလှောင်ထားရမည်။ လိင်တံရှိသွေးကြောများသည်သွေးကိုစိုက်ထူစဉ်အတွင်းသွေးမှထွက်ခွာခြင်းကိုမတားဆီးနိုင်ပါကသင်၏စိုက်ထူမှုကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ ဤသည်သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်ဟုခေါ်သည် သွေးပြန်ကြောများသည်သွေးကြောရောဂါနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်မှုနှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည် ဆီးချိုရောဂါ, Peyronie ရဲ့ရောဂါ (ကွေးမှဦးဆောင်သောလိင်တံအတွက်အမာရွတ်တစ်သျှူးများ၏ buildup နာကျင်စိုက်ထူ), အခြို့သောအာရုံကြောအခြေအနေများနှင့်ပင်ပြင်းထန်စိုးရိမ်စိတ်။
အသက် ၄၀ ကျော်နေပြီဖြစ်သောလူတစ်ယောက် Re: ဤ PIED လား? ED နှင့်အတူကူညီပါ!
RE: သွေးပြန်ကြော, ငါ့ urologist နှင့်အတူငါဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။ သူကဒါကိုစမ်းသပ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်၊
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်သွေးပြန်ကြောကြီးကြီးမားမားရှိပါကအခက်အခဲနှင့်အလွန်ကောင်းသည့်ရလဒ်များကြောင့်သူသည်ခွဲစိတ်ကုသရန်အလွန်နှေးကွေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်တစ်စုံတစ်ခုအတွက်စမ်းသပ်နေပြီးအသုံးဝင်သောမည်သည့်အရာအတွက်အချက်အလက်ကိုမသုံးနိုင်ပါ။ နှင့်
၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သောလူငယ်များအတွက်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ နံနက်သစ်သားနှင့် / သို့မဟုတ်ညဘက်၌စိုက်ထူခြင်းများကိုသင်ရရှိပါက ED အကြောင်းရင်းဖြစ်ခြင်းသည်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်နိုင်ချေနည်းသည်။
အဲဒီအချိန်တုန်းကနံနက်ခင်းမှာခဏခဏခဏခဏ ၀ ယ်တာဖြစ်လို့ယိုစိမ့်တာကငါ့ရဲ့ပြproblemနာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခဏလောက်တွေးမိတယ်။ ဒါပေမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း PMO ကိုထိထိရောက်ရောက်မထိတွေ့နိုင်တော့တဲ့နောက်၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပြန်မလာပါကနှစ်လကြာပြီးနောက်အများစုသည်မနက်ခင်း၌ထင်းထင်းခဲ့ရသည်။
ငါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာကြောင့်ပျက်စီးမှုရှိနိုင်တယ်လို့လည်းထင်ခဲ့တယ် ငါပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အားကစားလှုပ်ရှားမှုများကြောင့်ငါပေါင်ခြံဖို့ခက်ခဲများနှင့်နာကျင် hits မြောက်မြားစွာကိုယူ။ သူကဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်ခံရမည့်စိတ်ဒဏ်ရာအမျိုးအစားကိုဆေးရုံတက်နေစဉ် ER သို့ပို့ပေးပါလိမ့်မည်ဆိုပါက .... ရတနာများကိုရံဖန်ရံခါထိမှန်ရုံသက်သက်မဟုတ်ပါ။ ဂိမ်းထဲကငါ့ကိုယူဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
သိသာထင်ရှားတဲ့, ဒီအပေါငျးတို့သသို့ရာတွင်နှင့်ငါ့တိကျတဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ် အခြေခံ. ဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏အဓိကအချက်: အညစ်ညမ်း၏အခွင့်အလမ်းနှင့်သင့် fapping အလေ့အထများပြဿနာဖြစ်ခြင်း, ဤသည်အခြားအမှုအရာအချို့ထက်အပြတ်အသတ် သာ. ကြီးမြတ်ပုံရသည်။
J ကိုလိင် Med ။ 2011 Aug;8(8):2344-9. doi: 10.1111/j.1743-6109.2011.02298.x.
Teloken PE, ပန်းခြံ K ကိုက Parker က M, Guhring P ကို, Narus J ကို, Mulhall JP ။
တစ်ဦးသွေးကြောစမ်းသပ်မှုအဖြစ်, ပြောင်းလဲနေသောပြုတ်ရည် cavernosometry (DiC) ကျော်ကြားမှုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းနှင့်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအသိုင်းအဝုိင်းအတွက် penile duplex Doppler ultrasound (DUS) erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏သွေးကြော etiology စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဝါးစမ်းသပ်ဖြစ်လာသည်။ Vasoactive အေးဂျင့် redosing DUS များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးမြှင့်ပြသလျက်ရှိသည်။
DUS အပေါ်ယခင်ကရောဂါသွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်နှင့်အတူယောက်ျားအတွက် erectile hemodynamics သတ်မှတ်ရန်။
အလားအလာဒေတာ (ဈ) တစ်ခုအပြင်ဘက်တွင် DUS အပေါ်အခြေခံပြီးသွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်နေတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပေးထားခဲ့သောလူနာအပေါ်စုဆောင်းကြသည် ဟူ. ၎င်း, (ii) တစ်ထပ် DUS ခံယူဖို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်; အဆိုပါထပ် DUS သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်အကြံပြုလာသောအခါနှင့် (iii), DiC ခံယူ။
DUS: အထွတ်အထိပ်နှလုံးကျုံ့အလျင်နဲ့အဆုံး-diastolic အလျင်။ DiC: စီးဆင်းမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့။
292 လူနာပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။ စံ±စံသွေဖည်အသက်± 44 ± 26 နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထပ်ခါတလဲလဲ DUS တွင်, 19% (56/292) လုံးဝပုံမှန် hemodynamics ရှိခဲ့ပါတယ်နှင့် 7% (20/292) သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲသာသွေးလွှတ်ကြောမလုံလောက်ခဲ့ရသည်။ လူနာ ၅၈% (၁၅၂/၂၉၂) တွင် ၁၃% (၃၈/၂၉၂) တွင်ပုံမှန် hemodynamics ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးသွေးပြန်ကြောရောဂါကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်မှုကိုဖော်ထုတ်ပေးသောလူနာ ၄၇% (၁၃၇/၂၉၂) တွင်ပုံမှန်သွေးယိုစီးဆင်းမှုရှိသည်။ ၄၃% တွင်သာ (၁၂၆/၂၉၂) တွင်သွေးပြန်ကြောစစ်ဆေးမှုကိုထပ်မံအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဘက်ပေါင်းစုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, အသက်ငယ် (<13 နှစ်), မူရင်း DUS စဉ်အတွင်းလုံလောက်သောစိုက်ထူရရှိရန်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် <38 သွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်အချက်များရှိခြင်းသွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်၏မှားယွင်းသောရောဂါ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။
penile DUS တိသွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်နေတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကို assign တစ် propensity ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သိသိသာသာသွေးကြောအန္တရာယ်အချက်သမိုင်းမပါဘဲလူပျိုအတွက် DUS ဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာဂရိတ်စောင့်ရှောက်မှုယူသင့်ကြောင်း, ကောင်းတစ်ဦးစိုက်ထူရယူပေးဖို့ပျက်ကွက်သွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်နေတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုတာဝန်ပေးဖို့အတွက်ဆရာသတိထားစေသင့်ပါတယ်။ ထို့အပွငျနေဆဲသွေးပြန်ကြောယိုစိမ့်ဖော်ထုတ်မှာ သာ. ကွီးမွတျတိကျမှန်ကန်မှုရှိပုံရသော cavernosometry များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ, ရှိနေပါသည်။